Beesha Caalamka oo War kasoo saartay doorashooyinka Somalia digniina dirtay | SMC
Home WARARKA MAANTA Beesha Caalamka oo War kasoo saartay doorashooyinka Somalia digniina dirtay
Beesha Caalamka oo War kasoo saartay doorashooyinka Somalia digniina dirtay
Xubnaha Beesha Caalamka ee taageerada siiya Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka iyo wada-hadalladii Dhuusamareeb ee aan wax natiijo ah kasoo bixin .
Qoraal Wadajir ah oo ay soo saareen Beesha Caalamka ayaa waxaa ay ku taageereen shirarkii looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ee dhacay, iyaga oo ugu baaqay saamileyda siyaasadeed ee dalka inay ka heshiiyaan arrimaha doorashooyinka.
Xubnaha Beesha Caalamka ayaa waxaa ay markale ka digeen in la qabto doorasho hal dhinac ah, waxaana ay sheegeen inay taageerayaan wada-hadallo kasta oo xal looga garayo muranka kajira doorashooyinka Soomaaliya.
Hoos Ka Akhriso Qoraalka kasoo baxay Xubnaha Beesha Caalamka.
Saaxiibada beesha caalamka* waxay soo dhoweynayaan dadaalada ay sameeyeen madaxda siyaasadda Soomaaliya si loo gaaro heshiis ku saabsan hirgelinta hanaanka doorashada ee 17kii Sebtember. Wadahadalladii lagu qabtay Dhuusa-mareeb 1-6 Febraayo horumar ayaa laga sameeyay qodobo badan oo muhiim ah, laakiin laguma wada heshiin dhammaan qodobadii taagnaa. Waxaan aaminsannahay in weli ay suurtagal tahay in la gaaro is-afgarad, iyo in dhammaan dhinacyadu ay ogol yihiin wada hadallo dheeri ah. Waxaan ugu baaqeynaa madaxda Soomaaliya inay dib u billaabaan wadahadalkooda si dhakhso loo gaaro heshiis kama-dambeys ah oo suurto-gelinaya in doorashooyinka qaran ay u dhacaan sida ugu dhakhsiyaha badan.
Waxaan si xiiso leh u dhageysanay hadal-jeedintii Madaxweynaha ee Golaha Shacabka 6dii Febraayo, waxaana si gaar hoosta uga xariiqnay sida uu u doonayo inuu sii wado wadahadallada u dhexeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedyada, wadahadalladaas oo ujeedadoodu tahay in la isla garto wadiiqo lagu heshiiyey oo loo maro qabashada doorashooyinka. Waxaan si xoog leh u taageersannahay wadahadal dheeri ah oo ku qabsooma jawi deggan oo wax lagu dhisayo. Waxaan mar kale hoosta ka xariiqeynaa in natiijooyin kasta oo aan ahayn kuwa la isku raacsanyahay, oo ay ku jiraan geeddi-socod barbar-socod ah ama doorashooyin dhinac keliya ah oo aan loo dhammayn, ama falal kale oo aan si ballaaran loogu wada heshiin, in aanay heli doonin taageerada saaxiibada beesha caalamka.
Waxaan ugu baaqeynaa madaxda siyaasadda Soomaaliya inay ka amba-qaadaan dhinacyada wanaagsan ee doodda Dhuusamareeb, ayna sii wadaan wada-shaqeynta, si loogu heshiiyo hirgelinta doorashooyinka iyadoo la ilaalinayo danta qaranka.
Previous articleDagaal ka dhacay Gobolka Bakool & faah faahin laga helayo
Next articleCiidamo dhar cad ah oo maanta gudaha loo galiyay xarunta ay ku shiraan Baarlamaanka !!